Hevitra MPANOHARIANA | Septambra 2008 | 3
Ahoana ireto haintrano mampieritreritra ireto?
2008-09-09 @ 19:51 in Andavanandro
Noho ny hamaroan'ny trano hazo eto amin'ny tanàna angaha fa dia misy mandrava trano ampolony na anjatony mihitsy izy izany. Noho izay fanorenana amin'ny hazo mora mirehitra izay ihany ve fa dia misy anaran-toerana vao re fotsiny dia mampiteny hoe "izay indray", resy indray ilay afo fanangana tao Antongona raha vao mananontanona hanafika eto Imerina ny Sakalava nahatonga ilay fitenenana hoe "efa ho lava tahaka ny afon'Antongona".
Anarana malaza loatra izany Antohomadinika III G Hangar izany, impiry isan-taona no re fa trano ampolony indray no may? Tsy haiko aloha na dia tsy manana fo antra loatra aho fa sady kely no hazo ve no andrehetana afo ao anatiny... na dia ny kilalaon'afo mahalasa lavitra ireny ve tsy hanao izay vitany? Fa misy kisendrasendra mampiahiahy mandrakariva ity toe-javatra ao Antohomadinika III G Hangar ity. Nisy ny fotoana hoe tonga ny fitaovana entina hanampiana izay mety ho tra-boina fa vetivety dia maro ny trano may ao. Izao indray vao nahavita ny fivoriany tao amin'ny Auditaurium Ankorondrano Antananarivo tao ny DISTIM Antananarivo renivohitra ary mitetika ny hahazo ny fon'Antananarivo lasan'ny hafa izao dia iny fa nisy trano may indray tao. Azafady indrindra re fa mahalasa saina ilay izy. Efa nahavita nitondra fanampiana sahady aloha ny DISTIM Antananarivo renivohitra fa tsy fantatro raha efa nahavita ny anjara fanampiany ny Kaominina Antananarivo renivohitra e! Sao dia haintrano politika ary ity raharaha ity sanatriavina anie?
Anarana fandre talohaloha ihany koa izany Anosinakoho Mananjary izany. Mbola tsy tany mihitsy aloha ny tenako ary tsy mahalala izay toetoetry ny toerana fa dia matetika may ny toerana tany. Mba tsy re aloha izy tao ho ao fa enga anie tsy ho re intsony satria toa hanala baraka izay olona avy any mipetraka an-tanàna hafa araka ny fiheverako azy izay mety ho diso.
Dia efa rentsika vao tamin'ny faran'ity herinandro ity indray ny tao Ankirihiry Toamasina. Vao amin'ny gazety fotsiny dia tsy fantatra marina ny isan'ny trano may. Loharanombaovao avy aiza angaha ireny isa mifangarika ireny? izao ka raha vao re fa nitondra ny fanampiany ho an'ny traboina ny fitondram-panjakana dia nitombo ho maherin'ny 2 600 tampoka teo ilay tra-boina latsaky ny arivo (800) iny. Tena tsy afaka amin'ny toe-tsaina amin'ny Malagasy maro ve ny manararaotra hanao izay fomba angatahina, hahazo zavatra maimai-poana? Tsy fantatra amin'ny fomba ofisialy moa ny anton'ny afo, fa ny tsilia-tsofina tsy azo amarinina loatra saingy mety hitombina no nandrenesana fa misy olona mitahiry lasantsy betssabetsaka an-trano ihany ao amin'ity faritra ity. Raha miteny azy ny manodidina dia valiany hoe "fialonana ny anareo satria mandeha ny bizinanay". Tsy lasa lavitra mihoatra izay ny eritreritra raha vao re fa poa toy izay (tsy ampy fahefakadiny) no nahamay ny trano rehetra tao Ankirihiry ity. Asa sotasotan'ny manodidina miara-may trano aminy ve no anton'ny afo raha izay toe-javatra izay?
Aiza ny toeram-pandraisana izay tonga isaky ny tanàna?
2008-09-08 @ 10:01 in Ankapobeny
Hiditra tsikelikely amin'ny tatitry ny diako tany Antsirabe sy Mahajanga amin'izay aho. Tsy ho vita vetivety izany fa mety hihoatra ny iray volana aza. Ankoatra izay ny mety ho vaovao hafa ampiataina tampoka. Manintona ahy hatrany na dia tsy misy fiaran-dalamby tonga intsony aza ny garan'Antsirabe. Eo no manamarina amiko fa tonga eo amin'ilay tanàna tokoa aho. Ny anao kosa re aiza ny toerana hahatsapanao fa tonga eto Antananarivo tokoa ianao na tonga amina tanàna iray hafa ianao?
Mahavariana tokoa anie ity toerana ity fa misy vahiny mpitsidika hatrany e? inona re no tena manintona aminy? Ny toerana misy azy ve? sa ny tantarany?
Mbola kely tokoa angaha ny tena fony zatra nankany fa hay kely ihany ity trano ity indrindra raha jerena avy ao anatiny nefa mahafinaritra kosa aloha ny ikarakaran'ny madarail ny toerana e!
Na izany na tsy izany kosa aloha, ny toerana manodidina azy no tena manosika ny tena hankasitraka ny toerana e! na dia itony vato tsy dia manandanja fa manandoko itony fotsiny aza.
Dia mety mbola hitohy ny tantara amin'ny manaraka ary e!
baolina fandaka: Misento indray ny Barea fa nandresy androany
2008-09-07 @ 14:29 in Spaoro
Araka ny fantatry ny mpanaraka baolina fandaka dia androany alahady no nanaovana ny lalao miverina teo amin'ny Barea sy ny Zebra Botsoaney. Efa nanantena handresy mihitsy ny vahiny raha tamin'ny talata teo dia efa tonga haka ny hafanana gasy. Vao tamin'ny alarobia ihany koa no resin'ny Japan Actuel's roa noho ny aotra teo Mahamasina ihany ny Barea raha nanao fitsapana.
Efa nampanatena rahateo sady be fanantenana ireo ekipa ireo satria na dia resy aza amin'ny lalao fitsapana no mandresy izy amin'ny lalao tena izy. Tamin'ny fidirana voalohany no tafiditra ny baolina ka nandresen'ny Malagasy iray noho ny aotra... tsy niova intsony io isa io ka nampientanentana ny fanafihana nataon'ny vahiny sy ny vali-bontan'ny malagasy. Samy tokony ho nahatafiditra baolina rahateo na ny andaniny na ny ankilany.
Voalohany ao amin'ny sokajy misy antsika ka manana isa fito noho izany ny Ivoariana. Faharoa isika manana isa enina. Fahatelo manana isa dimy ny Botsoaney ary fahaefatra farany manana isa efatra kosa ny mozambikana.
Matanjaka kokoa ny Zain
2008-09-03 @ 12:38 in Toekarena
Ekeko tokoa fa tsy dia tiako loatra ny loko sy ny mariky ny Zain fa raha ny tanjaka kosa dia tena manana izy araka ny fijeriko. Teny andalam-pivezivezena manko aho dia ninia nampitaha ny Zain sy ny Orange eo amin'ny fahazoana miserasera eny an-dalana eny. Efa reko ihany fa tsy misy fahatapahana mihitsy ny fahazoana miserasera Zain amin'ny lalam-pirenena faharoa. Dia nohamariniko kosa ny lalam-pirenena fahafito Antananarivo hatreo Antsirabe. Raha tsy tapaka mihitsy ny reseau ho an'ny Zain afa-tsy tamina faritra iray izay ihany dia zara raha manana ny reseau-ny kosa ny an'ny Orange.
Nojereko indray ny fifandraisana eo amin'ny roa tonta tamin'iny lalam-pirenena fahaefatra mampitohy an'i Mahajanga sy Antananarivo iny dia toraka izany hatrany. Vitsy loatra ny faritra ahafahana mifandray amin'ny alalan'ny orange nefa ny an'ny Zain dia betsaka tokoa no ahafahana mifandray aminy na dia misy toerana vitsy aza tsy ahazoana azy. Marihina fa tsy manana ny tambazotra telma aho ka tsy fantatro mihitsy ny azy. Raha amin'ny lalam-pirenena izany dia matanjaka kokoa ny Zain miohatra amin'i Orange. Fampitahana tsotra ny ahy fa tsy nisy nanakarama aho.
Nampidirin'i jentilisa | 15 Hevitra | Trackback (0) | Permalink